देश अब उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको प्रधामन्त्रीको घोषणा « Clickmandu
देश अब उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको प्रधामन्त्रीको घोषणा
प्रकाशित मिति : १७ फाल्गुन २०७३, मंगलवार १८:३१
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘ प्रचण्ड’ले देश अब उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । देशबासीका नाममा आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठदेखि लोडसेडिङ देशभर नहुँने घोषणा गरे ।
‘मुलुक अब अध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको छ’,प्रधानमन्त्रीले भने, ‘लोडसेडिङ मुक्तले राजस्व र औद्योगिक गतिविधी मात्र बढेको छैन यसले देशका जनतामाथी आफैमा भरोसा बढाएको छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले घोषणा गरेको समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन निस्पक्ष र धादली रहित तरिकाले गर्ने प्रतिबद्धता जायर गरे । ‘जनताको ढोकामा विकास र जनताको ढोकामा सरकारको युग निर्वाचन मार्फत हुने छ’,प्रधानमन्त्रीले भने,‘अबको संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत तथा पछाडी परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।’
उनले निर्वाचन सफल पार्न अन्तराष्ट्रिय समुदायको सहयोग चाहिने बताए । असन्तुष्ट पक्षलाई सिधै सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले एकात्मक राज्य संरचनाले महिला,मधेशी,आदीवासीको अधिकारमा को लड्यो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।
संविधान संसोधनका लागि सरकार परिवर्तन गरेको भन्दै दाहालले संविधान संसोधन टेबल भएको र पारित गराउन पहल गरिरहेको बताए । नयाँ संविधान मधेशमा चाहिएको भन्दै देशका परम्परागत शासक वर्गलाई गणतन्त्र,संंघियता र धर्मनिरपेक्षता मन परेको बताए । ‘ अहिले त्यही बर्ग मधेशका जनतामा बन्दुक राखेर परिवर्तन उल्टाउन चाहेको छ । त्यसमा मधेशका जनता गोटी बन्नु हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
अनुगमन कार्यविधि बनाउन ५ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको अनुगमन कार्यविधि मस्यौदा बनाउन ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको सम्पत्तिः १ करोड बढी बैंकमा, कुन कम्पनीको सेयरमा कति लगानी ?
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले
कांग्रेस पदाधिकारीलाई देउवाको निर्देशनः चुनाव बैशाखमा हुन्छ, तयारी गर्नु
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय तह निर्वाचन अगामी वैशाखमै गराउने
सार्वजनिक सवारी साधन, बैंक, बीमा, वित्तीय संस्था र एयरलाइन्सका कर्मचारीलाई जोर बिजोर लागू नहुने
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा लागू गरेको जोर बिजोर प्रणाली हटाएको छ । शुक्रबार
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका उद्योगको बचाउमा सिमेन्ट उत्पादक संघ, भन्यो- निराधार आरोप लगाइयो
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोप लागेको ९ सिमेन्ट उद्योगको बचाउमा सिमेन्ट उत्पादक संघ उत्रिएको छ ।
कसले हाल्यो भिष्म ढुंगानाको बैंक खातामा शंकास्पद १ करोड रुपैयाँ ?
अनावश्यक टर्मिनल बनाउन २२ अर्ब खर्चिने प्रपञ्च, विष्णु पौडेलको स्वार्थमा प्रदीप अधिकारी योजनाकार